Usimende Masons Futhi Finishers Ukhonkolo Job Description / Izindima Futhi Duty Isifanekiso – JobDescriptionSample
Home / Usimende Masons Futhi Finishers Ukhonkolo Job Description / Izindima Futhi Duty Isifanekiso
superadmin June 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 25 Views
izinto echachambile sekugcineni kasimende oswakanyiswe, isibonelo flooring imizila, izindlela, noma curbs kuqashwa Ukukhetha yezandla namandla amathuluzi. Hlela izinhlobo mayelana eziseceleni noma emiseleni; patch voids; futhi siqasha ezihluthulelwe ukusika ukunwetshwa amalunga omzimba.
Hlola izinhlobo ukuthi ukusekela eziphathekayo ukubuka ukuthi uqamba kahle ezenziwe.
Fixed amafomu ukuthi baphathe usimende maqondana-toss abafunwa futhi ezingeni, bese uhlela lezi.
Sabalalisa, iflothi, sleek eziphathekayo, futhi isigaba, kuqashwa ok, hala, entendeni noma amandla trowel, ukunikeza noma amandla screed.
Isikhunta ukunwetshwa amalunga omzimba kanye namathiphu, sisebenzisa amathuluzi ilungiswe, jointers, futhi wokulinganisa.
Gada indlela ukufudumala umoya, noma nesithwathwa cool kuthinte ukuqeda we usimende kulo lonke indlela ephelele.
Ngena truckdriver ukubeka imoto ethutha umshushuluzo ukuze ukhonkolo ngqo ku izinhlobo, futhi ukusiza ukukhonza yangempela.
Yenza olwalwenza usimende ebusweni, ibhulashi nokusebenzisa.
Amandla okungukuthi umsebenzi Vibe ukuze obunamandla bokuthi incane.
Ngaso leso sikhathi lo Simoni we usimende kanye ukugada izisebenzi ezifuna kusetshenziswe namafosholo noma amathuluzi esiyingqayizivele ayihambise.
Sika izindawo ngokugcwele ngaphandle wabhubhisa, izimbobo sokuprakthiza reinforcer izinduku, nendawo eqinisa izinduku ukulungisa eziphathekayo, usebenzisa amandla ithuluzi kanye Punch.
Wet usimende phansi, futhi zisebenza ukuvundulula ukuthi kwaba amatshe ahlanzekile kokuba athole ecacisiwe ephelele futhi.
phansi Manzi ukuhlela ngoba ngibopha, amakhefu ephelele futhi emaphaketheni nge grout noma slurry, futhi ehlanzekile, usebenzisa trowel.
Area aqhephukile, sisebenzisa faka ikamu, nesipiliyoni bese bethola phansi ukuthola uma anolaka noma esingemnandi.
Manzi noma buyisela Ingaphandle, kanye nokuqalisa lukhuni futhi ukuvikela compounds ukulungisa ubuso wangempela.
Isibikezelo sezulu sezinsuku Hard ukuze uqedele eziphathekayo, phala, futhi usebenze ezindaweni ezinkulu, uhlangothi, futhi processor, kuqashwa amathuluzi esandleni, amandla Mills, noma emoyeni amashizolo.
Hlanganani isikhutha ukuthi kukhona ugodo, zesikhunta evikelekile emhlabeni indawo ukuba abe kwalungisa, usebenzisa amathuluzi esandleni.
Ungacebi izigaba, amathiphu, futhi kusekela ukhonkolo.
Amanzi nemithi noma bayomisa evele ukhonkolo, awasebenzisele izinto ezifanele.
Mount ukukuqeda ulwelwesi yangaphandle ukunikezela sekugcineni kuhle noma ihange ngezikulufo, izingubo metal kanye nabanye zalapho e zikakhonkolo nezezinye fresh noma iphethini.
Inhlanganisela ukukhiqiza grout, noma slurry, usebenzisa trowel, Tinker, phala, noma imishini ukhonkolo-ngokuhlanganisa.
Sabalalisa uphahla iphepha endaweni ngesisekelo, futhi ukusabalalisa yangempela ungene umbiko ukufulela nge trowel ukwakha isizinda terrazzo.
Vuvuzela jewel chips noma itshana hued, powder steel, noma umbala powder phezu Ingaphandle ukudala ephelele lomisiwe.
Ngakho ukuthi izinhlangothi ehola ezihlukahlukene isakhiwo ayethanda noma isakhiwo ukunciphisa metallic ithimba tape, kanye nabezindaba wabayisa terrazzo sokuqala.
Sebenzisa muriatic acid hashaza ngamanzi, futhi ukuhlanza ebusweni.
Phoqa curler phezu kwamanzi ukuze ungeze chips ebusweni.
isicwebezelisi ebusweni, ekuvezeni kudivayisi noma ukufaka isicelo elola.
Umsebenzi Izinto Ukufaneleka
Ukufunda Isifundo sokuqondisisa-Ukuqonda imishwana namaculo futhi izigaba emsebenzini amadokhumenti ezihambelana.
Ukulalela-Ukuze Active yiziphi ezinye-abantu bathini ukunikela ukunakwa okuphelele,, ukuthola isikhathi ukuba uqaphele izinto kokuba ekhiqizwa, nezindaba bebuza njengoba enhle, hhayi mesmerizing at izikhathi ukuthi kukhona okungalungile.
Ukushicilela-Ukuxhumana ngempumelelo ngokubhala hhayi njengokungabafanele ukuswela emakethe.
Ukuxhumana-Ukukhuluma-kwabanye ukwabelana ngolwazi kwamandla.
Maths-Ukusebenzisa izibalo ukuxazulula izinkinga.
Ubuchwepheshe-Ukusebenzisa izimiso zezokwelapha futhi amasu ukulungisa izinkinga.
Ecabanga ukuthi kubalulekile-Ukusebenzisa isizathu nokucabanga ukuqaphela emihle nemibi izixazululo ehlukile, imibono noma izindlela ukuze izinkinga.
Active-Learning-Ukuqonda izinzuzo imininingwane fresh mayelana kokubili samanje futhi oluzayo problemsolving kanye izinqumo.
Ukufunda Strategies-Ukusebenzisa bese ukhetha amasu trainingANDinstructional futhi inqubo efanele isimo othize lapho ukuqonda noma ibayala izinto fresh.
Ihlola-CheckingPERDetermining ukusebenza sabantu ezengeziwe, ukuthuthukisa indlela esibukeka ngayo, noma izinkampani ukuthatha isinyathelo sokulungisa noma ukukhiqiza ngcono.
Komphakathi Perceptiveness-Ekwazini othersA izimpendulo nolwazi ngenkathi benza kungani uphendule.
Dexterity-Ukulungisa netento ngekwemagugu abanye’ imisebenzi.
Marketing-Okuqotho abanye ukushintsha imikhuba noma imicabango yabo.
Arbitration-Ukuthatha abanye bebonke nokuzama buyisana umehluko.
Ukuqeqeshwa-Ngokufundisa abanye nje indlela ukuthatha isinyathelo.
Izikhungo Orientation-Ngezenzo uzama ukuthola izindlela ukusekela abantu.
Inkinga Complex Ukuxazulula-Inquma nobunzima yenkinga futhi critiquing nolwazi oluphathelene uhlolisise nokwakha izinqumo futhi zisebenza ongakhetha.
Izinqubo Ucwaningo-Ukuhlola izidingo nto futhi ufuna ukukhiqiza isitayela.
Ubuchwepheshe Design-Technology ukukhonza umthengi futhi ekhiqiza noma amadivayisi kokuba ufuna.
Isisetshenziswa Ukukhethwa-Icacisa uhlobo imishini namathuluzi waba isidingo akhiphe umsebenzi.
izinhlelo Isitolimende-Ukungeza, imishini, izintambo, noma imishini ukuze ifeze izimfuneko.
UHlelo-Kokuqamba ikhompyutha amaphakheji imisebenzi eminingi.
Ukusebenza Tracking-Ukubheka izimpawu ezihlukahlukene, namasumpa, noma ukuhlolwa ukuze uqiniseke idivayisi siyasebenza kahle.
Ukusebenza nesibambo-Ukusingatha nemisebenzi amadivayisi noma amadivayisi.
Isondlo-Buciko ukunakekela imikhiqizo kanye kokunquma uma nalokho uhlobo ukulondolozwa kuyadingeka.
Ukuxazulula-Ukunquma izimbangela ukugijima amaphutha bese ukhetha ukuthi ungenzani yimiphi-ke.
Ukubeka-Ukubeka imishini noma amasu sisebenzisa izindlela ezibalulekile.
Quality Control Ukuhlaziya-Kwenziwa ukuhlolwa kanye amasheke kwezimpahla, abahlinzeki, noma amasu ukulinganisa ukusebenza noma izinga.
Buka futhi Isinqumo Ukwenza-Ukucabanga izindleko jikelele nezinzuzo izinyathelo ukuthi zingenzeka ukuthola lowo lifaneleka kakhulu.
Ukuhlaziya-Icacisa indlela uhlelo kumele enze futhi indlela ukuthuthukiswa imisebenzi, izimo, futhi ezizungeze kuzoba nomthelela imiphumela.
Systems Ukuhlaziywa Ukuthola izinqubo noma izinkomba ukusebenza kanye ngokuhambisana Okuqondiwe kohlelo olunembile noma izinyathelo waba isidingo ukuthuthukisa ukusebenza.
Isikhathi Ukuphathwa-Ukuphatha komuntu isikhathi siqu kanye nabanye’ isikhathi.
Ukuphathwa Savings-Icacisa indlela imali kuzoluqinisa wachitha ukuze umsebenzi kufezeke, kanye ne-accounting for lezi zindleko.
Ukusebenza kwezinhlaka Material Resources-Ukwamukela nokubona ukusetshenziswa efanele Izinsiza, amathuluzi, kanye nemikhiqizo ezidingekayo sina ukwenza ethize isebenze.
Ukugada Yezisebenzi Resources-Ukuthuthukisa inkanuko, futhi ehola abantu ngenkathi they abasenzela, ukuhlukanisa abantu ngempumelelo kakhulu ukuthi umsebenzi.
Ezemfundo Ukufaneleka Ulwazi Ukufaneleka
Ngaphansi-ngaphandle eziphezulu School Degree
Senior School Degree (noma kukaGedaliya noma Senior School kwefrakshini Ukufaneleka)
Ngaphezu kwe 2 iminyaka, kakhulu ngendlela futhi kubandakanya 4 iminyaka
Umsebenzi Management Amakhono Isidingo
ukuphikelela – 89.32%
umzamo – 93.53%
Ukuphathwa – 94.98%
Worry Abanye – 88.12%
Umumo Cultural – 90.44%
Ukuzithiba – 89.08%
ingcindezi IThreshold ungayifaka – 87.53%
Ukuthembeka – 91.36%
Ukubhekisisa Yokuxhumana – 93.35%
Yokuziphatha – 90.56%
Ukuzibusa – 84.01%
Ukuthuthukiswa – 83.08%
Analytical Ukucabanga – 82.34%
Previous Social Science Research Jobe Incazelo Sample
Nyusa zezimali-amasevisi, ezifana ngokwesibonelo mortgage, levy, and investments guidance to consumers of banking …